Fadhigii golaha shacabka oo qabsoomi waayay - Halbeeg News
Fadhigii golaha shacabka oo qabsoomi waayay
Guddoomiyaha Baarlamanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan
MUQDISHO(HALBEEG)-Kulan ka mid ah kal fadhiyada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya oo lagu waday inuu maanta dhaco ayaa baaqday sababo la xidhiidha in fadhiga ay soo xaadiri waayeen tiradii uu ku qabsoomi lahaa.
Fadhiga maanta loo ballansanaa ayaa looga doodi lahaa hindise sharciyeedka duulista iyo saadaasha hawada waxaana golaha ka hor akhrin lahaa Maxamed Cabdullaahi Salad,wasiirka Gaadiidka circa iyo dhulka dowladda fedraalka ah Soomaaliya.
Afhayeenka golaha shacabka, mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay inaan loo dul qaadan Karin maqnaashiyaha caqabadda ku ah qabsoomidda fadhiyada baarlamaanka .
Guddoomiye Mursal ayaa sheegay in fadhiga soo socda ay golaha ka yeedhin doonaan magacyada xildhibaannada fadhiga ka maqan lana xisaabtami doonaan.
Fadhiga maanta ayaa waxaa ka maqnaa sadex dalool laba dalool xubnaha guud ee baarlamaanka , iyada oo caga jiid laga dareemayay shaqada golaha baarlamaanka tan iyo markii uu furmay kal fadhiga afraad ee golaha shacabka.
Maqnaashaha tirada badan ee xildhibaannada ayaa hoos u dhigeysa waxqabadka golaha iyo meel marinta sharciyada dalka oo u baahan in lagu wajaho si fir fircooni iyo hufnaan leh, guddoomiyaha baarlamaanka ayayna suura gal tahay in xildhibaanada ku maqan cudur daar la’aan inuu marsiiyo xeer hoosaadka baarlamanka.
In ka badan 120 muhaajiriin Soomaali ah oo dib loogu soo celinayo dalka
Wasiirka gaashaandhigga Turkiga oo Muqdisho soo gaaray